Mako 4 | Bhaibheri repaIndaneti | Shanduro Yenyika Itsva
Mashoko Akanaka Akanyorwa naMako 4:1-41
MIFANANIDZO YEUMAMBO (1-34)
Chaiita kuti Jesu ashandise mifananidzo (10-12)
Mufananidzo wemudyari unotsanangurwa (13-20)
Rambi hariiswi pasi petswanda (21-23)
Chaunoyerera vamwe nacho (24, 25)
Mudyari anorara (26-29)
Tsanga yemasitadhi (30-32)
Kushandisa mifananidzo (33, 34)
Jesu anodzikamisa dutu (35-41)
4 Akatangazve kudzidzisa ari pedyo negungwa, uye vanhu vakawanda zvikuru vakamuunganira. Saka akakwira muchikepe, akagara imomo ari nechekure nepamhenderekedzo, asi vanhu vese vakanga vakamira vakatevedza mhenderekedzo yegungwa.+ 2 Uye akatanga kuvadzidzisa zvinhu zvizhinji achishandisa mifananidzo,+ uye paaidzidzisa kudaro, akati kwavari:+ 3 “Teererai munzwe! Mudyari akaenda kunodyara.+ 4 Paaikusha mbeu, imwe yacho yakawira parutivi pemugwagwa, shiri dzikauya dzikaidya yese. 5 Imwe yakawira pane matombo, pakanga pasina ivhu rakawanda, uye yakabva yangomera nekuti ivhu racho rakanga risina kudzika.+ 6 Asi zuva parakabuda, yakatsva, ikaoma nekuti yakanga isina midzi. 7 Imwe mbeu yakawira muminzwa, minzwa ikakura ikaivhunga, uye haina zvayakabereka.+ 8 Asi imwe yakawira paivhu rakanaka, ikamera, ikakura, uye yakatanga kubereka zvibereko, ichibereka zvakapetwa ka30, ka60, uye ka100.”+ 9 Akabva atiwo: “Ane nzeve dzekunzwa, ngaanzwe.”+ 10 Paakanga ava ega, vamwe vadzidzi uye vane Gumi Nevaviri vakauya kwaari vakatanga kumubvunza pamusoro pemifananidzo yacho.+ 11 Akati kwavari: “Imi makapiwa chakavanzika chitsvene*+ cheUmambo hwaMwari, asi kuvanhu vari kunze zvese zvinongoramba zviri mumifananidzo,+ 12 kuti kunyange vachitarisa, vatarise asi vasingaoni, uye kuti kunyange vachinzwa, vasambobata zviri kutaurwa; uye havafi vakatendeuka kuti vakanganwirwe.”+ 13 Uyezve akati kwavari: “Zvino kana musinganzwisisi mufananidzo uyu, muchanzwisisa sei mimwe mifananidzo yese? 14 “Mudyari anodyara shoko.+ 15 Saka ava ndivo iya iri parutivi pemugwagwa panodyarwa shoko; asi pavanongorinzwa, Satani anouya+ otora shoko rakadyarwa mavari.+ 16 Ndizvo zvinoitikawo pane yakadyarwa pane matombo; pavanongonzwa shoko, vanorigamuchira nemufaro,+ 17 asi havana midzi. Vanotombobvuma shoko kwekanguva, asi panongomuka matambudziko kana kuti pavanotambudzwa nekuda kweshoko, vanogumburwa. 18 Kune imwezve inodyarwa muminzwa. Ava ndivo vaya vakanzwa shoko,+ 19 asi kuzvidya mwoyo+ nezvinhu zvemunyika ino* nesimba rinonyengera repfuma+ neruchiva+ rwezvimwe zvinhu zvese, zvinopinda zvovhunga shoko racho, rotadza kubereka. 20 Pakupedzisira, iya yakadyarwa paivhu rakanaka ndivo vaya vanoteerera shoko, vorigamuchira, vobereka zvibereko zvakapetwa ka30, ka60, uye ka100.”+ 21 Akatiwo kwavari: “Rambi rinomboiswa pasi petswanda* kana kuti pasi pemubhedha here? Handiti rinoiswa pachigadziko cherambi?+ 22 Nekuti hapana chinhu chakavigwa chisingazobudiswi pachena; hapana chinhu chakavanzwa zvekuti hachizobudi pachena.+ 23 Munhu wese ane nzeve dzekunzwa, ngaanzwe.”+ 24 Akatizve kwavari: “Nyatsoteererai zvamuri kunzwa.+ Chiyero chamuri kuyerera vamwe nacho, ndicho chamuchayererwawo nacho, kunyange kutowedzerwa zvimwe. 25 Nekuti munhu wese anazvo achawedzerwa zvimwe,+ asi munhu wese asina, achatorerwa kunyange zvaainazvo.”+ 26 Saka akaenderera mberi achiti: “Umambo hwaMwari hwakangofanana nezvinoitika munhu paanodyara mbeu muvhu. 27 Anorara usiku, omuka kwaedza, mbeu inomera yoreba, asi kuti izvi zvinoitika sei, iye haazivi. 28 Ivhu racho rega rinobereka zvibereko zvishoma nezvishoma, kutanga dzinde, kwozotevera hura, pakupedzisira tsanga dzakasvika dziri pahura. 29 Asi kana zvirimwa zvangoibva, iye anopinza jeko, nekuti nguva yekukohwa yasvika.” 30 Uye akaenderera mberi achiti: “Tingaenzanisa Umambo hwaMwari nei, kana kuti tingahutsanangura tichishandisa mufananidzo wei? 31 Hwakafanana netsanga yemasitadhi, iyo panguva yayakadyarwa muvhu yakanga iri mbeu diki pane dzimwe dzese panyika.+ 32 Asi painenge yadyarwa, inokura kupfuura zvimwe zvirimwa zvese uye inoita mapazi akakura, zvekuti shiri dzekudenga dzinokwanisa kuwana pekugara mumumvuri wayo.” 33 Akataura navo achishandisa mifananidzo+ yakadaro yakawanda, kusvikira pavaikwanisa kunzwisisa. 34 Aisatombotaura navo asingashandisi mufananidzo, asi aizotsanangurira vadzidzi vake zvinhu zvese vava vega.+ 35 Musi iwoyo ava manheru, akati kwavari: “Ngatiyambukei mhiri.”+ 36 Saka pavakanga vaita kuti vanhu vese vaende, vakabva vangoenda naye nechikepe, uye paivawo nezvimwe zvikepe zvaaiva nazvo.+ 37 Dutu guru raiva nesimba rakatanga, uye masaisai akaramba achirovera pachikepe, zvekuti chikepe chakanga chava kuda kuzara nemvura.+ 38 Asi iye akanga ari nechekumashure, akarara akatsamira pamutsago. Saka vakamumutsa, vakati kwaari: “Mudzidzisi, hamuna basa here nekuti tava kufa?” 39 Akabva amuka akatsiura mhepo yacho, akati kugungwa: “Shii! Nyarara!”+ Mhepo yacho yakabva yamira, kunze kukabva kwadzikama zvikuru. 40 Saka akati kwavari: “Muri kutyeiko? Nanhasi hamusati matombova nekutenda?” 41 Asi vakatya kwazvo, uye vakataurirana vachiti: “Munhu uyu anombova ani? Kunyange mhepo negungwa zvinomuteerera.”+
^ Kana kuti “zvemumamiriro ezvinhu epanguva ino.” Ona Tsanangudzo Yemashoko.
^ Kana kuti “petswanda yekuyeresa.”